Ukucoca Okuphuculiweyo kuka-Airbnb
Kukho umgangatho omtsha wococeko kuAirbnb. Fumana iindawo zokuhlala ezizibopheleleyo kwinkqubo yethu yokucoca exhaswa zingcali.
Ukuzibophelela kombuki zindwendwe kukhuseleko
Kunanini na ngaphambili, impilo yentsapho yethu yeyona nto ibalulekileyo. Ababuki zindwendwe emhlabeni wonke* kuza kufuneka bazibophelele kwinkqubo yamanyathelo amahlanu yokucoca okuphuculiweyo ka-Airbnb.
Inkqubo yamanyathelo amahlanu isekelwe kwincwadi yokucoca yakwa-Airbnb, eyenziwe kusetyenziswana noGqr. Vivek Murthy, owayesakuba nguGqirha Jikelele waseMerika ibe ixhaswa zingcali zehlabathi zezempilo nezokubuka iindwendwe.
Ayicocwanga nje qha, kunciphiswe neentsholongwane
Ukucoca okuphuculiweyo kuthetha ukugqitha ngaphaya kokucoca okuqhelekileyo ukuze unciphise iintsholongwane kwindawo yakho ngokuhambiselana nemilinganiselo ehamba phambili esetyenziswa ngamanye amashishini.
Kude nabantu abaninzi
Yonwabela ukuba wedwa kwikhaya elikude nekhaya, kude kwiindawo ezinabantu abaninzi nezinabantu abaphuma bengena. Imigaqo yethu yokuzikhusela kwiCOVID-19 iquka ukungasondeli kwabanye abantu ukuze uthi qelele kubo, ukhuseleke nokuba ukwindlu yomntu okanye ukwigumbi olala wedwa kulo.
Jonga uphawu lokucoceka
Fumana ababuki zindwendwe abazibophelele kwinkqubo yethu yamanyathelo amahlanu okucoca — jonga nje uphawu olithi, Ukucoca Okuphuculiweyo, phezulu kwizindlu zabo. Ukuze zifumane iinkcukacha ezingakumbi ngokuba ngabaphi ababuki zindwendwe abazibophelela ekucoceni, cofa apha.
Ukhuseleko yeyona nto ibalulekileyo. Ababuki zindwendwe nabantu abancedayo ekucoceni bacetyiswa ukuba banxibe iimpahla zokuzikhusela xa becoca.
Izinto zokubulala iintsholongwane ezivunyiweyo
Ababuki zindwendwe bafanele basebenzise izinto zokubulala iintsholongwane ezivunywe yimibutho emisela imithetho yasekuhlaleni ukuze balwe neentsholongwane.
Iindawo ezibanjwa kakhulu
Zonke iindawo, ingakumbi ezo zibanjwa qho, zifanele zicocwe kuze kunciphiswe iintsholongwane kuzo ngento yokubulala iintsholongwane.
Abacebisi bethu bezempilo abasemhlabeni wonke
UAirbnb wenze le migaqo yokucoca ephuculiweyo yamanyathelo amahlanu emva kokufumana amacebiso kuGqr. Vivek Murthy, owayesakuba nguGqirha Jikelele waseMerika, ibe isekelwe kwizikhokelo zeUS Centers for Disease Control and Prevention nakwizikhokelo Zombutho Wezempilo Wehlabathi (WHO). Ababuki zindwendwe kufuneka bajonge baze balandele zonke izikhokelo zasekuhlaleni.
Ihlaziywa njani le migangatho yokucoca njengoko kukhutshwa izikhokelo ezitsha?
UAirbnb uza kuqhubeka esebenzisana neengcali ezisicebisayo aze ajonge izinto ezintsha ezifunyaniswa yimibutho yezempilo emhlabeni wonke, size sihlaziye iipolisi zethu ngendlela efunekayo.
Ndingazi njani ukuba umbuki zindwendwe wam uzibophelele kwinkqubo yokucoca yamanyathelo amahlanu?
Ababuki zindwendwe abazibophela kwinkqubo yokucoca okuphuculiweyo baza kuba nophawu olukhethekileyo kwizindlu zabo—khangela nje uphawu lococeko. Ukuze zifumane iinkcukacha ezingakumbi ngenkqubo yokucoca engqongqo enamanyathelo amahlanu ababuki zindwendwe abazibophelela kuyo, jonga eli nqaku.
Ukuba ndingumbuki zindwendwe?
Njengombuki zindwendwe, ukuzibophelela kwinkqubo yamanyathelo amahlanu okucoca okuphuculiweyo kukunceda ulungiselele ixesha elizayo xa abantu behamba, kunika iindwendwe uxolo lwengqondo, ibe kubonisa intsapho yethu ukuba ucoceko ulujonga njengento ebalulekileyo. Ukuqala nge-20 kaNovemba, bonke ababuki zindwendwe kuza kufuneka bazibophelele kwiinkqubo zethu ezintsha zeCOVID-19 zokuzikhusela nokucoca, kungenjalo iiakhawunti zabo zinokunikwa izilumkiso, zinqumamiswe ibe ngamanye amaxesha, zisuswe kwiwebhusayithi ka-Airbnb. Ababuki zindwendwe kufuneka bafunde incwadi yokucoca ka-Airbnb, eneenkcukacha zeendlela zokucoca ezihamba phambili ukuze babone indlela yokusebenzisa inkqubo yamanyathelo amahlanu okucoca, kwaye bamele bajonge baze balandele imigaqo yasekuhlaleni. Cofa apha ukuze uzibophelele ekucoceni.
Zeziphi ezinye izikhokelo zempilo nokhuseleko eziye zenziwa ukuze kugcinwe abahambi bekhuselekile ebudeni bobhubhane weCOVID-19?
Ukuze senze okungakumbi kunokucoca okuqhelekileyo, senzele ababuki zindwendwe nabahambi izikhokelo ezitsha abamele bazilandele, ngokusekwe kwizikhokelo ezivela Kumbutho Wezempilo Wehlabathi ne-US Centers for Disease Control and Prevention.
Nazi izinto ezifuneka kubo bonke ababuki ziindwendwe neendwendwe:
Nxiba imaski. Ukuba ababuki zindwendwe neendwendwe kufuneka bedibene okanye ukuba kukho indawo esetyenziswa ngumntu wonke enokufikelelwa ngabantu abazibhukisheleyo, nxiba into yokukhusela ubuso ngawo onke amaxesha njengoko kucetyiswa ziiarhente ezilawulayo okanye ngabasemagunyeni.
Xa ukwindawo esetyenziswa ngabantu bonke (njengombuki zindwendwe okanye undwendwe) gcina umgama ofanelekileyo kuye nabani na ongahambi naye ngawo onke amaxesha.
Ukongezelela, sicebisa la manyathelo alandelayo okunceda ukuthintela ukusasazeka kweCOVID-19:
Hlamba izandla zakho rhoqo.
Sukwamkela iindwendwe okanye uhambe ukuba ubukhe wasdibana nomntu oneCOVID-19 okanye uneempawu zayo.
Qiniseka ukuba ulandela nayiphi na imithetho yasekuhlaleni okanye izikhokelo zengingqi yakho. Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi, jonga eli nqaku Kwiziko lethu Loncedo.